UYIFUMANA NJANI ILAYISENSI YASEMONTANA YOMTSHATO KUNYE NOCWANGCISO LOMTSHATO WE-MT - IINGCEBISO ZOKUCWANGCISA
Eyona Iingcebiso Zokucwangcisa Ungatshata njani ngokusemthethweni eMontana kwaye ucwangcise umtshato wakho we-MT
Ungatshata njani ngokusemthethweni eMontana kwaye ucwangcise umtshato wakho we-MT
Yilungele umtshato wakho obalaseleyo kwiLizwe eliKhulu leZulu ngokufumana inkqubo yelayisenisi yomtshato. USuzanne Rothmeyer Ukufota Ukuhlaziywa kwe-Aug 02, 2021
IMontana ineempawu ezintle zendalo, intaba amabanga kunye nesibhakabhaka esikhulu esiluhlaza macala onke, ke ayimangalisi into yokuba abantu bakhethe ukutshata kwiLizwe eliKhulu leZulu. Ngeepaki ezintle zelizwe, iindawo ezivulekileyo ezibanzi, iMontana ilungele nawuphi na umntu ongaphandle, rustic okanye umtshato wothando. Unokufumana yonke into oyifunayo malunga nokubhukisha kwaye ucwangciso umtshato waseMontana kwiKnot-kodwa mhlawumbi eyona nkcukacha ibaluleke kakhulu yindlela oza kuhamba ngayo malunga nokufumana iMontana yakho iphepha lomtshato ukwenza yonke inkqubo igqibe ngokusemthethweni kwaye yamkelwe ngurhulumente.
Inkqubo ngokwayo iqonde ngqo eMontana; akukho xesha lokulinda ukufumana iphepha-mvume lakho okanye ulisebenzise wakube ulinikiwe, kwaye lisemthethweni iinyanga ezintandathu emva komhla owawufumene ngawo. Inye into ebalaseleyo xa ithelekiswa namanye amazwe kukuba ilizwe laseMontana lifuna uvavanyo lwegazi kubafazi abangaphantsi kweminyaka engama-50. Ngaphandle koko, inkqubo iyakhawuleza kwaye ilula!
Ukuba wena okanye iqabane lakho ufuna ukutshintsha ifani yakho kwisicelo selayisensi yomtshato, ungayenza loo nto; Inkqubo yotshintsho lwamagama ijongeka yahlukile kancinci emva kokuba utshatile, ke kufanelekile ukuba ucinge malunga nokuba awungekhe ugcine igama lakho lobuntombazana kwangaphambili.
Ungatshata njani eMontana
Ngaba likho ixesha lokulinda ukutshata eMontana?
Akukho xesha lokulinda ukutshata eMontana - wakube ulifumene iphepha-mvume lakho lomtshato kuMabhalane weNkundla yeSithili, kulungile ukuba uhambe! Qaphela nje ukuba iphepha-mvume liphela kwiintsuku ezingama-180 emva komhla wokukhutshwa, ke qiniseka ukuba nomsitho womtshato wakho ngaphambi koko ukunqanda ukugcwalisa amaphepha kwakhona.
Zithini iimfuno zomthetho zokutshata eMontana?
Bobabini abatshatileyo kufuneka babekhona ngexesha lesicelo ukuze bobabini basayine, kwaye abasetyhini abangaphantsi kweminyaka engama-50 kufuneka bafumane uvavanyo lwegazi lweRubella ukuze batshate. Ukuba wazalelwa kwilizwe langaphandle, ulwazi lwakho kufuneka luguqulwe ngummeli-notary ukuze amkelwe ngumabhalana.
Abahlali baseMontana bayakwazi ukufumana ilayisensi nakweyiphi na indawo kwaye basebenzise iphepha-mvume lokutshata nakweyiphi na indawo yaseMontana.
Kufuneka ube uneminyaka eli-16 ubuncinci ubuninzi ngemvume yokugweba ukuze ufake isicelo somtshato. Abo bangaphantsi kweminyaka yobudala (abangaphantsi kweminyaka eli-18) bayakufuna imvume yabazali okanye imvume kumgcini wabo osemthethweni, kwaye abaneminyaka eli-15 ubudala nangaphantsi banokutshata okanye bafake isicelo sesicelo selayisensi yomtshato eMontana.
Yintoni ethathwa njengomtshato oqhelekileyo eMontana?
IMontana lelinye lawona mazwe ambalwa awamkelayo umtshato oqhelekileyo womthetho. Ukungqina kwinkundla yesithili ukuba niyatshata emthethweni oqhelekileyo, wena neqabane lakho kufuneka nibe noku kulandelayo: kufanelekile ukuba nitshate, kufuneka nivume ukuba nitshatile kwaye nihlala kunye kwaye niyazibonakalisa ukuba nitshatile. Zonke ezi zinto zingaboniswa kwijaji yenkundla yesithili ngeendlela ezahlukeneyo, ke izinto ezinje ngokufaka iirhafu ngokudibeneyo, ukufaka imisesane, nokuba abanye abantu bakholelwa ukuba utshatile, njl. umtshato.
Iphepha-mvume lokutshata eMontana 101
Yintoni oyifunayo ukuze ufumane iLayisensi yoMtshato eMontana?
Ngaphandle kokuza neendlela zokuhlawula umrhumo wesicelo, uyakufuna isazisi sefoto kunye nobungqina beminyaka yobudala ukuze ufumane ilayisensi yomtshato. Oku kunokubandakanya naluphi na olu lwazi lulandelayo, kubandakanya iphepha-mvume lokuqhuba elisemthethweni, uvavanyo lwegazi, igama elipheleleyo, ikopi eqinisekisiweyo yesatifikethi sakho sokuzalwa; Qiniseka ukuba ujonga kwiOfisi kaNobhala Wenqila kule County uzakutshata ukuze ubone ukuba zeziphi kanye kanye abazifunayo.
Ukuba wawukhe watshata ngaphambili, kufuneka uze nobungqina bokuba umtshato uphela; oku kungangohlobo lwommiselo woqhawulo-mtshato, isatifikethi sokufa, okanye nawaphi na amaphepha asemthethweni angqina ukuba ungowona kanye umhla womtshato oza kuphela.
Ixabisa malini ilayisensi yomtshato waseMontana?
Imali yesicelo selayisensi yomtshato eMontana yi- $ 53, kodwa akukho xesha lokulinda ukusebenzisa iphepha-mvume emva kokuba kufakwe amaphepha.
Kuthatha ixesha elingakanani ukufumana iMvume yokutshata eMontana?
EMontana ungayifumana ilayisensi yakho yomtshato kanye emva kokuba ikhutshiwe; akukho xesha lokulinda emva kokukhutshwa, kwaye uneenyanga ezintandathu zokuba nomsitho womtshato kwaye unike iphepha-mvume lakho umphathi emveni koko.
Ngaba ungasifaka isicelo seLayisensi yoMtshato kwi-Intanethi eMontana?
Ezinye izithili eMontana zifuna ukuba uprinte kwaye ugcwalise amaphepha ngaphambi kokuqeshwa kwakho. Eli liqondo lokuba ungakanani ongakwenza kwi-Intanethi nangona: wena neqabane lakho kufuneka nibekhona kwaye nisayine ngexesha lesicelo sakho.
Ufumana njani ikopi yelayisensi yakho yaseMontana yomtshato?
Unoku-odola ikopi yelayisensi yakho kunye nesatifikethi somtshato ngokucela iMontana Vital Record. Bafuna ukuba uthumele itsheki yobuqu okanye iodolo yemali ehlawulwe kubo, kwaye ungayamkeli imali ezinkozo.
Unokucela ikopi kwi-Intanethi ngokusebenzisa iVitalChek, kwaye kule meko kwamkelwa kuphela amakhadi okutsala okanye amakhadi etyala. Le ndlela ithatha malunga neentsuku ezi-2 ukuya kwezi-5 ukuyifumana.
Ukucwangcisa iMontana umtshato
Izixeko ezahlukileyo kunye neendawo zokujonga umtshato waseMontana
Nokuba uhlala eMontana okanye awukho kwimeko yokuhlala, nawuphina umntu unokububona ubuhle baseburhulumenteni ngokuhlala kuwo kube kanye. NgePaki yeSizwe yeGlacier, iPaki yeSizwe yeYellowstone, iiNtaba zeBighorn, amaThafa amakhulu kunye nentlango enkulu kuyo yonke le ndawo, yindawo entle kubathandi bendalo. Naliphi na indawo okhetha ukutshata nayo eMontana iya kuza nomqolo wayo owahlukileyo, ukusuka emathafeni ukuya ezintabeni ukuya kumaqabana omkhenkce nayo yonke into ephakathi.
Ukuba ujonga into encinci yasemaphandleni, iidolophu ezinje ngeeBillings, iMissoula kunye ne-Helena zonke zinomxube omnandi wobugcisa be-rustic kunye nobugcisa bendabuko. Iindawo zangaphandle ngokuqinisekileyo zithandwa kakhulu eMontana (ungabona ukuba kutheni), kodwa zininzi iindawo zangaphakathi zomnyhadala kunye nolwamkelo lwakho olunomtsalane.
Yintoni ekufuneka ujonge kuyo kwindawo yomtshato waseMontana
Ukuba ujonge ukutshata eMontana, zininzi izinto onokukhetha kuzo kunye neembono ezininzi ukulungiselela usuku lwakho olukhulu. Ukusuka kumahlathi amahle, izilwanyana zasendle kunye namathafa amakhulu, nakweyiphi na imeko engaphandle yomtshato wakho ngokuqinisekileyo ayinakulibaleka. Ungajonga indawo yeMarike yeKnot kwiindawo ezithile kwizixeko ezithile ezikuluhlu lwamaxabiso akho kunye nokuhambelana nawe kunye nesimbo sakho seqabane.
uphawu lomtshato kwimibono yencwadi
Indlela yokufumana uMthengisi womtshato waseMontana
Zininzi iintlobo zabathengisi ekufuneka ziqwalaselwe ngomtshato wakho waseMontana; ukusuka ikeyiki ukuya caterer ukuba DJ, kukho ukhetho olukhulu. Kuxhomekeka kuhlahlo-lwabiwo mali kunye nokunambitheka, unokufumana umculo othile wasekhaya kunye nokutya okuphefumlelwe yidolophu oza kutshata kuyo, okanye ufumane ezinye ezinento encinci kuwo wonke umntu. Indawo yemarike yeKnot yindawo entle yokufumana zonke iintlobo zabathengisi, ukuze ufumane umntu kuyo yonke imiba yomtshato wakho ukwenza usuku lube lolugqibeleleyo.
AmaXesha aBalaseleyo oNyaka ukuba noMtshato waseMontana kwimozulu entle
Umbuso waseMontana womile ngokupheleleyo, kodwa kuba ikwisimo esikhulu, imozulu iyahluka. Kukho amaxesha amane okwenyani kweli lizwe, ke unokulindela ngokubanzi ubusika bubanda , ihlobo litshisa, njalo njalo. Awunakhathazeka ngeentlekele ezininzi zendalo — iMontana ibalwa njengelinye lawona mazwe akhuselekileyo ukuba uhlale kuloo ndawo. Kuxhomekeke kuhlobo luni lomtshato ojonge ukuba kulo ngexesha lonyaka, zininzi kakhulu iindawo ezahlukeneyo kwilizwe lonke ukuba ungafumana incasa yayo yonke into, nokuba uyaphi okanye nini.
Umama womfazi womtshato
amagumbi okulala aphefumlelweyo eParis
Ukutshintshwa kwelayisenisi lokutshintsha igama